Diego Maradona oo Dhiig uga furmay Caloosha – Gool FM
Diego Maradona oo Dhiig uga furmay Caloosha
(Mexico) 05 Jan 2019. Halyey Diego Maradona oo lagu sheego inuu yahay kii ugu fiicnaa ebid soo mara kubbada cagta adduunka ayaa la dhigay Isbital kaddib markii la sheegay inuu caloosha dhiig uga furmay.
Yeelkeede, sida ay sheegtay gabartiisa Dalma, Maradona ayaa laga soo saaray Isbitalka.
58-jirka reer Argentina ayaa tijaabooyin joogta ah ku marayay dalkiisa hooyo ka hor inta uusan dib ugu soo laaban dalka Mexico halkaa uu macalin u yahay kooxda ka ciyaarta heerka labaad ee Dorados de Sinaloa markii ay dhakhaatiirtu ogaadeen dhibaatadiisa.
“Kuwa dhabtii aad uga walaacsan aabahey waxaan idin sheegayaa inuu fiican yahay iminka,” Dalma ayaa sidaa ku soo qortay boggeda Twitter.
“Goor dhow guriga ayuu imaanayaa.”.
Yeelkeede, ilo wareedyo ku dhow dhow reeerka Maradona ayaa Reuters u sheegay in dhibaatada aysan ahayn mid halis ah isla markaana laacibkii hore ee Boca Juniors, Napoli iyo Barcelona uusan marna khatar galin.
Ilo wareed kale ayaa sheegaya in halyeyga reer Argentina kaa oo ka soo baxay Isbitalka isagoon la hadlin saxaafada laga yaabo inuu maro tijaabooyin caafimaad oo dheeri ah.
Maradona ayaa inbadan ku hoyday Isbitaalo sanadihii la soo dhaafay tan iyo markii uu ciyaaraha ka fariistay 1997.
Adrien Rabiot oo ku soo jeeda Barcelona...(EEG sida ay u muuqan doonto SHAXDA Barça)